Izilwane – Page 2 – iAfrika
Uma uphupha ubona impungushe kusho ukuthi kufanele uqaphele ingozi. Uma uyibulalaimpungushe kodwa uyonqoba ezimpikiswaneni nasemibangweni yakho nabanye. Amaphupho ngezimpisi. iAfrika
Uma uphupha ubona imvubu kufanele uqaphele esikhashaneni esilandelayo. iAfrika
Uma uphupha ubona indlovu kusho ukuthi uzothuthuka empilweni futhi ube nempilo enomdlandla. Kuphakathi kokuthi uzothola imali obungayilindele noma uzothola umvuzo ngokusebenza kwakho kanzima. iAfrika
Tags Izilwane, Izindlovu
Uma uphupha imbila yeqa endleleni yakho kusho ukuthi uzoba nenhlanhla. iAfrika
Tags Izilwane, Izimbila
Uma uphupha ubona ingwenya kuwuphawu olubi. Kusho ukuthi uyakhohliswa – kungaba abathandiweyo bakho noma abangani bakho – futhi uzoba sempini kungekudala. iAfrika
Tags Izilwane, Izingwenya
Uma uphupha ubona ikameli kuyinhlanhla enhle ekusaseni lakho. iAfrika
Tags Amakameli, Izilwane
Uma uphupha ubona inyamazane ngokujwayelekile kuwuphawu olubi. Ukuyibulala noma ukuyizingela kusho ukuthi uzolahlekelwa okusemqoka maduze – okungaba ngisho umsebenzi wakho. Isikhathi esiningi kusho ukuthi uzohlangabezana nempikiswano enkulu nomunye umuntu khona maduze. iAfrika
Tags Izilwane, Izinyamazane
Uma uphupha ubona izimfene kufanele uqaphele ngoba kunabantu abafuna ukukudla izithende. iAfrika
Tags Izilwane, Izimfene
Amaphupho ngesilwane esidla izintuthwane nomuhlwa
Uma uphupha ubona isilwane esidla izintuthwane nomuhlwa uzobhekana neshwa ikakhulukazi izinkinga obungazilindele lapho osebenza khona. iAfrika
Tags Izilwane, Izintuthwane
Uma uphupha ubona imvu kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwehleka kuwe. Eyodwa nje imvu isho ukuthi uzochuma emsebenzini ikakhulukazi uma imnyama. Iqulu lezimvu lisho ukuthi uzophumelela futhi ube nomshado ojabule nonobuqotho). Amaphupho ngenqama. iAfrika
Tags Izilwane, Izimvu
Uma uphupha ubona inqama kusho ukuthi uzoba neshwa ekusaseni lakho. Amaphupho ngemvu. iAfrika
Tags Izilwane, Izinqama
Amaphupho ngemvu esencane
Uma uphupha ubona izimvu ezisencane incazelo iya ngokuthi uziphatha kanjani. Uma uzifuya futhi uzinakekela kusho ukuchuma nempumelelo kuwe. Uma uzihlaba noma uzidla kusho ukuthi uzovuma ngokubi okwenzile bese ujeza. iAfrika
Uma uphupha ubona ihansi kusho ukuthi uzochuma futhi uphumelele emsebenzini wakho ikakhulukazi uma lenza umsindo. iAfrika
Uma uphupha ubona imbuzi kusho ukuthi uzoba nenhlanhla uma imbuzi imhlophe kodwa ishwa uma imnyama. iAfrika
Uma uphupha ubona amadada uzochuma futhi uphumelele ingqobo nje uma ungawabulalanga. Kulesosimo kusho ishwa nenkinga. iAfrika
Tags Amadada, Izilwane
Uma uphupha ubona inkunzi ngokujwayelekile kusho izinto ezimbi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi kuzoba nenkohliso ukungqubuzana kanye nenkinga okuzokwehlela ikakhulukazi uma kuyinkunzi emnyama. Amaphupho ngenkomo. iAfrika
Uma uphupha ubona ihhashi kusho injabulo nokuchuma ekusaseni lakho ikakhulukazi uma limhlophe. Uma ihhashi lithukutheke ngesikhathi uligibele kusho ukuthi uzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho. Amaphupho ngembongolo. iAfrika
Uma uphupha ubona ikati kuwuphawu olubi olusho ukuthi abantu osebenza nabo noma ophila nabo awukwazi ukubethemba. iAfrika
Amaphupho ngokuzwa inja ihlaba umkhulungwane
Uma uphupha ukuthi uzwa inja ihlaba umkhulungwane kusho ukuthi kunezinto ezimbi ezizayo. Uzoba nezikhathi ezinobunzima nokulwa maduzane. iAfrika
Tags Izilwane, Ukuzwa